Football Khabar » रोनाल्डो विश्वकै सबैभन्दा प्रख्यात खेलाडी : मेस्सीको स्थान कहाँ ?
रोनाल्डो विश्वकै सबैभन्दा प्रख्यात खेलाडी : मेस्सीको स्थान कहाँ ?
यो समयका प्रख्यात टप–१० खेलाडीहरूको सूची सार्वजनिक भएको छ । यो खेलकुदको सबैखाले विधाको तथ्यांक हो । चर्चित अमेरिकन संस्था ‘इएसपिएन’ ले सार्वजनिक गरेको एक सूचीअनुसार इटालियन युभेन्टस तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक प्रख्यात खेलाडीको सूचीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा छन् ।
रोनाल्डो पहिलो नम्बरमा पर्दा उनका खास प्रतिस्पर्धी स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सी भने सूचीको तेस्रो नम्बरमा मात्रै छन् । दोस्रो नम्बरमा बास्केट बेल खेलाडी लेब्रोन जेम्स छन् । त्यस्तै, ब्राजिलका स्टार फुटबलर नेइमार चौथो स्थानमा छन् ।
प्रकाशित मिति २३ कार्तिक २०७६, शनिबार २०:४३